कुन अंगमा सुन लगाउँदा कति शुभ, कति अशुभ ? भुलेर पनि नलगाउनुस् यी अंगमा सुन
Homeसमाचारकुन अंगमा सुन लगाउँदा कति शुभ, कति अशुभ ? भुलेर पनि नलगाउनुस् यी अंगमा सुन
January 1, 2021 admin समाचार 4691
मानिसहरु सुन’लाई विभिन्न गहना बना’एर लगाउने गर्छन् । सुन मात्र होइन चादिँ तथा अन्य विभिन्न धातुको प्रयोग गरि गहना लगाउने गरिन्छ । मानिसहरु सुन लगाउन निकै सौ’खिन हुन्छन् । पुरुष भन्दा बढि महिलाले सुनको प्रयोग गर्ने गर्छन् ।
हरेक धातुले हाम्रो शरी’रमा कुनै न कुनै असर पारिरहेको हुन्छ । मानिसहरु सुनलाई विभि न्न गहना बनाएर लगाउने गर्छन् । सुन मात्र होइन चादिँ, तामा तथा अन्य विधिन्न धातु’को प्रयोग गरि गहना लगाउने गरिन्छ । मानिसहरु सुन लगाउन निकै सौखि’न हुन्छन् । पुरुष भन्दा यसको प्रयोग बढि महि’लाले गरिरहेका हुन्छन् ।
हरेक धातुले हाम्रो शरीर’लाई कुनै न कुनै असर पारेको हुन्छ । विभिन्न घातुबाट बनेका आभूषण लगा उँदा शरीरलाई फाइदा हुन्छ । तर गलत तरिकाले गरगहना लगाउँदा अशुभ हुने विश्वास गरिन्छ ।
सुन पनि एउ टा यस्तै धातु हो जस लाई लगा’उन जानिएन भने संकट आइ पर्न सक्छ ।सुन प्रयो’ग गर्दा तलका निम्न १३ तथ्यलाई ख्याल गर्नुपर्छ:
-देब्रे हातमा कहिल्यै सुन लगा’उनु हुँदैन । यो हात’मा सुन लगाउँदा समस्या आउने गर्छ । लगाउनै परेमा भने ज्योतिषसँग सल्लाह लिनुपर्छ । खुट्टामा सुन पहि’रिएमा वैवाहिक जीवनमा स’मस्या आउने र स्वास्थ्य खराव हुने गर्छ । घरमा सुन राख्दा उत्तर–पूर्वमा रहेको कोठामा राख्नुपर्छ ।
– सुनलाई रातो वा पहेँ लो कपडामा बाँधेर राख्नु’पर्छ । सुनसँग केसर राखेमा धन प्राप्ति हुने गर्छ । – गर्भवती तथा वृद्ध महि लाले सुन लगाउनु हुँदैन ।
– साइँली औं’लामा सुनको औंठी लगा’उने हो भने सन्तान प्राप्ति हुन्छ । ब्राह्मण, पुजारी वा गुरूलाई सुन दान गर्नुपर्छ । अपरि’चित वा अप्रिय व्यक्तिबाट सुन लिनु हुँदैन ।
– सुन भेट्टाउनु वा हराउनु दुबै अशुभ मानिन्छ । सुन हराउँदा बिरामी बिरामी भइने र भेट्टाउँदा खर्च बढ्ने गर्छ । वैवाहिक जीवनलाई सुखी बनाउनका लागि गलामा सुनको सिक्री र कान्छी औंलामा सुनको औंठी लगाउनुपर्छ ।
– फलाम वा को’इलाको काम गर्ने मानिसले सुन लगा उनु हुँदैन । यी व्यक्तिले सुन लगाएमा व्यापारमा नोक्सा न पुग्छ । यदि पहिरिनु परेका ज्योतिषसँग सल्लाह लिनु राम्रो मानिन्छ ।
– फलाम वा कोइलाको काम गर्ने मानिस’ले सुन लगाउनु हुँदैन । यी व्यक्तिले सुन लगाएमा व्यापारमा नोक्सान पुग्छ । यदि पहिरिनु परेका ज्योतिषसँग सल्लाह लिनु राम्रो मानिन्छ ।
-सुनमा सर्दी र गर्मी दुबै ऊर्जा हुन्छ । रूघा, ज्वरो आएको बेलामा कान्छी औलामा सुनको औंठी लगाउनुपर्छ । सुनपानी खाने हो भने रोग प्रतिरोधी क्षमतामा वृद्धि हुन्छ ।
-कम्म’रमा कहिल्यै पनि सुन लगाउनु हुँदैन । कम्मरमा सुन लगाउँदा पाचन प्रणाली खराव हुने र पेटसम्बन्धी स’मस्या देखिने गर्छ ।१३) पेट वा मोटोपनको सम’स्याबाट पीडितले कहिल्यै सुन लगाउनु हुँदैन । साथै धेरै रिसाउने मानिसले पनि सुन लगा’उनु राम्रो हुन्न ।
सुनको विश्वव्या’पी मान्यताको कारण भनेको यो ब’हुमुल्य धातु हो र यसलाई सुखको गहना र दुःखको ख’जना भन्ने भनाई पनि हाम्रो समुदायमा प्रचलित छ जसका कारण सुन’को महत्वलाई टेको दिन सकेको छ ।
सुनचाँदी बजा’र पत्रिकाका सम्पा’दक प्रकाश समीरका अनुसार नेपाली मौलिक गहनाहरुमा सुनको अत्याधिक प्रयोग हुने गरेकाले पनि नेपालमा सुनको महत्वमा बृद्धि भएको बताउ’नुहुन्छ ।
विकशित मुलु’कहरुमा आधुनिक मेसि’नहरुद्धारा कम तौलमा सुनका गहना तयार गर्ने गरिए पनि नेपालमा त्यो नरहेको र अझै पनि नेपाली मौलिक गहनाहरु बढी मात्रामा चल्ने गरेकोले सुनको खपत नेपा:लमा अत्याधिक हुने गरेको समीरको भनाई छ ।
लामो समयसम्म सुन’चाँदीको क्षेत्रमा क्रिया’शिल पत्रकार प्रकाश समीरले नेपालमा सुनको कारोवा’रमा निश्चित मापदण्ड नबनेका कारण यसको कारोवारमा समस्या देखि’एको पनि बताउनुहुन्छ ।
आज नेपालमा सुनको मूल्य घट्यो कि बढ्यो ? हेर्नुहोस्
भारतका चर्चित गायक सानले गाएको नेपाली गीत ‘नक्कली कान्छी’लाई २ लाख पटक हेरियो (भिडियो हेर्नुहोस्)
राजाको दलहरु सँग गोप्य सहमती भएको र’हस्य, अब के होला पुर्ब राजाको कदम ? (भिडियो सहित)
March 27, 2021 admin समाचार 2031
पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपाल जस्तो अल्प’विकशित राष्ट्रका लागि युवा नै सर्वे’सर्वा भएको बताएका छन् । राजा शाहले ट्वीटर मा’र्फत जनमतको क’दर गर्न नजान्ने शासक र ऊद्वारा स्थापित कुनै पनि राज्य प्रणाली प्रभा’वकारी नहुने भन्दै
November 25, 2020 admin समाचार 6479
आमा भन्ने शब्द कति प्यारो हुन्छ त्यो बुझ्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ हो त्यस्तै एक दुखित आ’माको कथा आज जोड्दै छौ। धनकुटाकि चेली शर्मिला घिसिङ् सानैमा बैबा’हिक जी’वनमा बाधिएकी थिईन। १७ बर्षकै उमेरमा बिबाह गरेकी शर्मिलाको
January 16, 2021 admin समाचार 4092
सरकारले अब स’वारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षाको ढाँचा परि’वर्तन गर्ने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको छलफलमा परीक्षा प’रिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। उक्त छलफलपछि लाइसेन्स परीक्षाको ढाँचा
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (204959)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (196435)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (195935)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (195793)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (194194)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (193915)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (192159)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (191689)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (184583)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (161266)